Anyi etinyela ego ruru Ijeri nari naira itoolu (#900b) na ọkụ latriki | odumblog
Anyi etinyela ego ruru Ijeri nari naira itoolu (#900b) na ọkụ latriki
posted on Jul. 15, 2019 at 11:29 pm
Osote onyeisiala Yemi Osibanjo ekwuola na gọọmenti etiti etinyela ego ruru ijeri nari naira itolu maka ọkụ latriki kemgbe afọ 2015. O kwuru nke a mgbe ọ gara leta onyeisi ndi Asaba nke a na-akpọ ‘Asagba of Asaba’ bụ Ọkz. Chike Edozien n’ụbọchị Fraide.
O kwuru na ha tinyere ijeri nari naira abụọ (#200b) n’oge gara aga, mana ugbu a, ha etinyekwala ihe ruru ijeri nari naira isii n’elu ya. O kwuru na ihe kpatara ndi Naijiria ji enewe nsogbu ọkụ bụ maka na ndi Distribution Companies anaghi ahụ maka ụfọdụ ebe. O kwuru na ha ewepụtala atụmatụ dị iche iche iji gboo mkpa ọkụ na Naijiria.
O kwukwara na Niger Bridge nke a na-arụ bụ nke gọọmenti etiti na-agbalị ịhụ na-arụpụrụ ya n’oge. Dika o siri kwuo, Onyeisi ala Muhammadu Buhari na-akwụ ụgwọ ngwa ọrụ eji arụ ya bụ bridge ma na-elebakwa anya na ya iji hụ arụrụ ya nke ọma.
Osote onyeisiala rịọrọ gọọmenti etiti ka ha gbalia rụọ Mahadum nke Etiti n’Asaba iji meda ha obi maka oke ọnwụ gburu ọtụtụ ndi Asaba n’afọ 1967. O kwuru na Asaba bụ naani obodo fọdụrụ na Naijiria na-enweghi Mahadum nke Etiti.
Onuorah Jennifer July 15, 2019
Ndi Fulani ọchị ehi agbagbuola nwa onye ndu Afenifere
Ndi Yoruba enye otu Miyetti Allah ụbọchị atọ ịkpọpụta ndi gburu Ada Pa Fasoranti
Odum Blog4 days ago